आठ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ४५ करोड ३८ लाख: सूर्या लाइफको सबैभन्दा बढी, कुन-कुन देखिए अब्बल ? - Arthatantra.com
आठ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ४५ करोड ३८ लाख: सूर्या लाइफको सबैभन्दा बढी, कुन-कुन देखिए अब्बल ?
काठमाडौं । संचालनमा रहेकामध्ये आठ जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
विवरण अनुसार चालु आवको असोज मसान्तमा आठ जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४५ करोड ३८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
कम्पनीहरुको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने ३२.३६ प्रशितले घटेको हो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीहरुले ६७ करोड ९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए ।
आठ कम्पनीहरुमध्ये तीन वटा नाफा घटेको देखिएको छ । उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ ।
कम्पनीले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ११ करोड ३५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम्पनीको नाफा ११.७९प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको असोज मसान्तमा कम्पनीले १० करोड १६ लाख १० हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।
प्रतिशतका आधारमा भने सबैभन्दा बढी यूनियन लाइफको देखिएको छ । कम्पनीले गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यस वर्ष ४२.५१ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । गत वर्ष २ करोड ४१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्षको असोज मसान्तमा भने ३ करोड ४४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कमाएको छ ।
यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाल लाइफ, नेशनल लाइफ र गुराँस लाइफको नाफामा गिरावट देखिएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तमा २२ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको नेपाल लाइफले यस वर्षको सोही अवधिमा ७० लाख ३३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा ९६.९२ प्रतिशतले घटेको हो ।
यस्तै, नेशनल लाइफको नाफा २६.७२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा ११ करोड ८३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले यस वर्षको सोही अवधिमा ८ करोड ६७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।
त्यसैगरि गुराँस लाइफले गत वर्षको असोज मसान्तमा ४ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा भने ४.१४ प्रतिशतले घटेर ४ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कमाएको छ ।
उक्त अवधिमा रिलायन्स लाइफले ४ करोड १५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीको नाफा गत वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा भने ३८.१८ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको उक्त अवधिमा कम्पनीले ३ करोड ७३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
चालु आवको असोज मसान्तमा प्रभु लाइफले ३ करोड ३१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.२२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको उक्त अवधिमा कम्पनीले ३ करोड ९लाख २४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
यस्तै, एशियन लाइफले ९ करोड ६२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीको नाफा गत वर्षको असोज मसामन्तको तुलनामा २.३८ प्रतिशतले बढी हो ।
वि.सं.२०७८ कात्तिक ३० मंगलवार १४:३५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे आगोसँग नजिस्किन अमेरिकालाई चीनको चेतावनी
पछिल्लाे बढ्दो भ्रुण हत्याले महँगिँदै मधेसका महिला